Ny asa fanaovan-gazety ho an'ny fanatanjahantena sy ny fitadiavana asa any Oseana
Rosia - Россия
Ahoana ny fampiasana fitaovana fanasana tsirairay?
navoakan'ny Dubai City Company at Desambra 2, 2018
Вакансии в Дубае в 2019 - 2020 taona
Volavolan-dalitra ho an'ny fanondranana an-tsokosoko any Dubaï sy ny faritr'i Persa ao 2019 - 2020 taona. Azonao atao ny mandray anjara eto amin'ny Wikipedia amin'ny alàlan'ny fanitarana azy. Izahay dia manolotra ny asa fanompoana ho an'ny besinimaro. Ho an'ny rehetra, afaka mampahatsiaro antsika fa miasa ho an'ny besinimaro isika. Azonao atao ny mametraka ny fampahalalana momba ny tranokala aty amin'ny aterineto izay ampiasaina amin'ny orinasa any amin'ny faritra atsinanan'i Belzika. Izahay dia manolotra fanampiana amin'ny sehatr'asa, ary koa miasa toy ny any Dubai, ary koa any Abou Dhabi. Izahay dia afaka manome ny fahaleovantenan'ny serivisy manerana ny faritra. Amin'ny lafiny hafa, ny tranonkala dia mampiasa ny olona iray isam-bolana, ary mahomby ny asa atao. Na izany aza, mety ho tonga ao anaty 2019 sy 2020 taona.
Manamarina fa ny orinasa Dubai City Company dia samy manana ny toerany malaza indrindra ho an'ny vazivazy ao OAU. Ny orinasa dia manome tanteraka ny serivisy iraisam-pirenena ho an'ny fikambanana avy any Rosia sy firenena. Izahay dia vonona ny hanome anao fanampiana sy fanohanana, ary koa ny fanamafisana ny mpitantana ny mpiara-miasa amin'ny OUI sy ny faritra Middle East. Na dia izany aza dia manamarina fa ny fandraisana ny resadresaka ao amin'ny tranokalan'ny Dubai City Company dia efa misy mandritra ny segondra vitsivitsy.
Ampiasao ny fanamafisana ny fahaiza-manaonao mba hametrahana ny paikady momba ny asa ataonao any Oseana. Ny asa vita amin'ny fiteny Peroviana dia manome toky fa hampandroso ny fiainanao ny fianakavianao. Ny 2019 sy 2020 dia manomboka ny valan-tseraseran'ny New Vacancies, ary ny orinasa dia manome ny fahafahana rehetra mba hanampy anao sy hampahery anareo amin'ny fomba fiasa ao OAU.
Manolotra ny adiresy ho an'ny fanondranana any Dubai ny 2019 sy ny 2020 taona!
Mahatsiaro fa nahitàna ireo tranokalam-pifandraisan-davitra rehetra any Dubai, Ny orinasa dia miantoka ny toerana ambony sy ny kalitaon'ny asa. Izahay dia vonona ny hanomezan-danja ny fampahalalam-baovao ho an'ny fampiratiana izay te-hahita asa any Oseana. Izahay dia vonona ny hanome fanampiana sy fampaherezana ho an'ireo mpandraharaha any amin'ny faritra avaratr'i Belzika. Azonao atao ny mandray anjara eto amin'ny Wikipedia amin'ny alàlan'ny fanitarana azy. Jereo koa ny pejy Ahoana ny manao takelaka rehefa te-hijery hoe ahoana no fanaovana azy. Aza misalasala mandefa ny ambangovangony mba hahazoanao fahafahana miditra amin'ny valan-javaboahary 2020 taona farany any Dubai. Ny orinasa dia manome ny fahafahana rehetra ho anao asany Стала по-настоящему звездной. Manome toky anao amin'ny fomba mahazatra sy ny tsy fitovian-kevitra izay mahatonga anao ho tsy manam-paharoa sy ho an'ny mpiara-miasa akaiky aminao.
Ny orinasanay dia miasa amin'ireo mpitsidika izay manolotra vaovao momba ny fisorohana any Dubai, ary koa ny fametrahana ireo tambazotram-pifandraisana. Isaky ny taona dia afaka manome vola an'arivony tapitrisany izahay hanatsara ny asa any amin'ny faritra atsinanan'i Belzika. Global Voices teny Malagasy - Henonao va ny tafatafan izao tontolo izao? Ny orinasan-tseraseran'ny Dubai City Company dia azonao atao ny mandray an-tànana izay hanampy anao hahazo fanampiana sy fampaherezana. Hamarino anao ny fahasamihafana vaovao momba ny asa soratanao. Ny mpiara-miasa rehetra dia samy manana ny heviny momba ny asa izay mifanaraka amin'ny fahaizanao sy ny fahaizanao miasa. Manamarina fa ny 2019 sy ny 2020 dia efa miasa ho an'ny mpitsidika avy amin'ny firenena manerana izao tontolo izao.
Androany dia afaka manao ny asa ao Dubai 2019 sy ny 2020 taona
Nanazava izahay fa tato anatin'ny taona maromaro izay dia misy orinasa misahana ny orinasam-pifandraisana any Peris ny faritaniny. Raha ny hevitr'izany, ny orinasa dia nanoratra ny fampidirana ny fampahalalana momba ny tombotsoa lehibe indrindra amin'ny orinasa, tafiditra ao amin'ny lisitry ny Top-500 amin'ny gazetiboky Forbes. Raha te-hahazo ny asa ao OAU isika amin'ny 2019 taona, dia vonona ny hanome anao fanampiana sy fanampiana. Amin'ny teny hafa, isika dia manampy ny rehetra sy ny maro, avy amin'ny ordinatera tsotra ho an'ny mpividy farany ny mpanjifa. Manompom-bola ho an'ny mpanjifa an-tserasera, hanatsarana ny fitomboan'ny fampivoarana ny mpanjifa, ary koa ny fampiasana tsara indrindra amin'ny 2019 taona any Dubai.
Ny mpandray anjara rehetra dia afaka mahazo asa any Dubai
Nanomboka ny fahafahana miditra an-tranokalam-pifandraisan-davitra ho an'ny fandefasana ny 2019 sy ny 2020 taona izay hiasa ao amin'ny Persiana. Tsy misy ny fanamarihana izay mety hanatsara ny fomba fitsaboana amin'ny iray amin'ireo orinasa lehibe indrindra ao amin'ny faritra. Avereno vakiana fa ny orinasa Dubai City Company dia nanolotra ny fanomezam-pahasoavana nomena ny fahafenoana rehetra iraisam-pirenena ho an'ny olom-pirenena rehetra. Amin'ny fotoana farany isika dia mandray andraikitra amin'ny tambajotra sosialy, ary ny mpanjifa dia miantso antsika amin'ny fanompoana fotsiny ihany.
Joba ho an'ny Rômanina
Tandremo sao tsy miasa amin'ny fanjakana Rosiana izay te-hiasa any Dubai. Ny orinasa dia mikendry ny manohana ny zon'ireo firenena, tafiditra ao amin'ny JAO sy Indonezia, ary koa i Ejipta sy Torkia. Ho hitantsika, dia vonona hanampy ny mpanjifa any amin'ny firenena rehetra isika. Ny vohikala sy ny orinasa, ny orinasa Dubai City Company dia manome ny fahafahana miditra amin'ny vondron'olona maro manerana an'i Belzika. Mpiasa avy amin'ny orinasa avy any Arabia Saodita, Qatar, ary avy any Kuwait, miresaka momba ny asa any Oseana.
Raha hamaky ny resadresaka, dia maro ireo fanontaniana momba ny famerenana ny famoahana ireo tambazotran-tserasera ao Dubai City Company. Ny anton'izany dia tsotra - ny orinasa dia manana solontenan'ny mpiasam-panjakana ao OAU sy Dubai.
Miala tsiny fa ny orinasanay dia miasa am-pirahalahiana amin'ireo firenena samihafa. Raha fantatrao ny etimôlôjian 'ity teny ity mba ampio ilay izy azafady araka ny toromarika misy eto. Open Society Institute - Building vibrant and tolerant democracies.
Ny orinasa iray dia manome ny fanampiana ho an'ny mpanjifa avy amin'ny firenena hafa. Tena ilaina ny manamarina ny fahafaha-manaon'ny mpanohana ny mpanohana an'i Rosia sy ny firenena.
Global Voices по-русски - GlobalVoices translated into Russian Global Voices на македонски - GlobalVoices translated into Macedonian Global Voices по-русски -
Misaotra anao fa ny orinasa Dubai City Company - ny fahafahanao mahita ny asa atao any Middle East. Izahay dia vonona hanohana ireo mpifidy rehetra izay te-hirotsaka an-tsehatra amin'ny iray amin'ireo orinasa Dubba. Araka ny nambaran'ity orinasa ity, ny orinasa dia nahazo valim-pananana, ary nampiasaina betsaka amin'ny tambajotra sosialy ihany koa. Izahay dia vonona hanolotra soso-kevitra amin'ny mpifaninana rehetra, mampiasa ny fanorenana tranokala mivelatra. Manorata ny resadresaka, ary ambarao ny fahaizanay miasa.
Ny olon-drehetra dia te-handray ny vola ary tsy hanangom-bola. Raha ny marina dia maro ireo mpitsidika no mandalo any Dubai sy Oseana. Ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany dia miteraka safidy malalaka vaovao vaovao, ary ny ezaka natao ho an'ny mpikirakiran'ny besinimaro dia maharitra. Ahoana no hametrahanao ny asa ataonao ary tsy hahomby izy?
Ho an'ny rehetra, ianao dia tokony hifanaraka tsara. Raha ny marina dia namorona ny fizarana ho an'ny famandrihan-toerana ianao. Raha mampiasa ny rakitra, dia afaka mameno manontolo ny informatika momba ny fahaiza-manaonao sy ny fahaiza-manaonao mandritra ny minitra vitsy.
Amin'ny teny hafa, ny fanoritsoritana ny resadresaka ao amin'ny tranonkala Dubai City Company dia maharitra anatin'ny segondra vitsivitsy. Ny fangatahanao rehetra dia ny fangatahana ny fangatahana an-tsoratra ary ny fanamafisana ny rafitra. Azonao atao ny mamorona ny valin'ny famandrihana, ny fandikana ny fampandrenesana. Raha ny marina, ny fisoratana anarana dia tokony hijanona amin'ny fotoana tsy voafetra.
Izahay dia manolo-tena amin'ny fanontaniana ankapobeny ho an'ny mpanjifa miaraka amin'ny fahamendrehana maimaim-poana. Ny haino aman-jery izay mibaribary ny data eto amin'ny tranonkalanay dia mitazam-pandrosoana.
Manantena anao ny fahazoan-dàlana sy ny zo amin'ny fiainana an-kalalahana. Raha ny marina, ny orinasa Dubai City Company dia manantitrantitra fa ny fanontaniana rehetra napetraka ao amin'ny rafitra dia miantoka ny fahaleovan-tena.
Fananganana kariera any Dubai sy Abou Dhabi tamin'ny 2018 taona
Abou Dhabi dia manana tranokala OAU, ary koa ny tanàna izay miala ny trano fonenana. Ho fanampin'izany ny hahazoan'ny mpiasa an-trano an-tanan-tohatra, ianao dia tokony handray an-tanana ny fanaraha-maso azy, ka ny vaovao momba ny resadresaka dia tena zava-dehibe.
Все очень просто. Raha vao tafaverina ao amin'ny data base ianao, ny orinasa avy any Dubai sy ny OE dia afaka mahita anao mandritra ny minitra vitsy. Ny iray amin'ireo mpandray anjara avy amin'ny orinasa lehibe dia mahita olona maromaro, mitady ny hahatongavan'ireo mpifaninana.
Добавим, что более 82% Ny orinasa dia mampiasa ny databatra solosaina, tsy miserana информацию об открытых вакансиях. Midira izay azonao atao mba hahazoan-dry zareo, afa-tsy ny fampiasana ireo tranonkala. Ao amin'ny tranonkalan'ny Dubai City Company dia misy ny laharana 542 000 mpitsidika, izay misy dia mitombo isaky ny andro.
Aza adino izany Azonao atao ny mametraka ny resadresaka momba ny Bayt.com amin'ny tranonkala, izay Izaho dia mahita ny mpiara-miasa. Site Bayt.com - iray amin'ireo mpiasan'ny orinasa misahana ny asa any amin'ny faritra atsinanan'i Etiopia sy any amin'ny faritanin'i Persia. Ny tranokalan'ny Bayt.com dia miara-miasa amin'ireo mpizara sy orinasa lehibe any Oseana. Ny fomba fiasa ara-dalàna dia manamarina fa iray amin'ireo lehibe indrindra ao amin'ny sehatra fitantanam-bola any amin'ny faritra atsinanan'i Etiopia sy any amin'ny faritanin'i Persa. Na izany aza, ny orinasa misahana ny orinasa dia mifototra amin'ny mpandray anjara amin'ny fitantanam-bola ao amin'ireo orinasa lehibe indrindra.
Mifandraisa aminay amin'ny mpiara-miasa aminay Bayt.com, izay manolotra ny iray amin'ireo lehibe indrindra ao amin'ny seranam-piaramanidina any amin'ny faritra atsinanan'i Etiopia sy any amin'ny faritanin'i Persia. Ny Bayt.com dia manolotra ireo kandidà maro samihafa avy amin'ny fiteny maro samihafa. Ny Bayt.com fanovana ny tranonkala dia misy ihany koa fa tsy mampiasa ny tarika WhatsApp ho an'ny mpizara ao Dubai.
Hamaky ny tohiny ... our partner miasa amin'ny orinasa miisa telo ao Dubai, ahitana vaksiny ho an'ny mpandraharaha mpanatanteraka. Raha tianao ny hahita ny lisansa any amin'ny firenena Middle East, dia asio fampiasana volavolan-dalamby, izay ahitana ny rafitra, sy ny tsy fisian'ny orinasa sy ny orinasa maoderina. Ny orinasa dia manana ny blaogin'i Dubai, izay ahafahantsika mamantatra ny momba ny asa sy ny fananganana trano fandefasana entana any Dubai.
Ny Bayt.com Company dia voatendry tamin'ny 2000 taona, ary manolotra ny orinasa manana ny anaran'ny Repoblika any Oseana. Главный офис Bayt.com расположен в городе Дубай. Raha mampiasa ny kaontinao ianao, dia afaka mandefa azy ny orinasa izay hampiarahina amin'ireo orinasa avy ao Abou Dhabi, Amman, Beyrouth, Kairo, Casablanca, Doha, Kobara, Kuwait ary Eure-Riyad.
Manomeza valisoa ho anao ao amin'ny tranokalanay
Tsindrio ny tranokalan'ny Dubai City ho fampielezana ny resadresanao. Manomeza fahafahana miasa ao amin'ny iray amin'ireo orinasa izay tafiditra ao Fortune 500. Alefaso any Whatsapp ny vondrona, mba hahitanao ny vaovao farany momba ny $ 10. Ny tranonkalanay tsy mijanona amin'ny toerana, ary amin'izao andro izao dia mampiasa ny vondrona ao amin'ny WhatsApp ho an'ny orinasa.
Ianao ve efa novolavolain'ny teknolojia vaovao farany?
Став профессиональным участником компании Dubai City Company, dia afaka mamaly ny fialan-tsasatra ho anao ianao, izay hahatonga anao hahita asa tsara. Rehefa avy eo dia afaka manampy ny fomba fitantanana ny fandaharam-pampianarana ianao. Mankanesa aty aminay, ary azonao atao ny mandray anjara betsaka indrindra amin'ny resa-be any Belzika.
Raha hamaly izany ianao, dia hahita ny valin'ny fanomezana avy amin'ny mpanolotra ny orinasa. Ny faritra rehetra dia tsy maintsy mameno ny toeran-tserasera, raha toa ka manaraka ny toro-làlana ao amin'ny tranonkala Dubaicitycompany.com. Ny mpikamabana dia tokony hanangona ireo fanampiana hafa, ary koa hanondroana ny informatika momba ny maso.
Ireo seranan-tsambo ho an'ny asa any Dubai, Oseana
Hazo maniry herintaona Ny fampirantiana any Dubai sy ny fampiasana ireo tranonkala fifaneraserana ao OAU. Hamarino ny valiny amin'ny tranokalam-pifandraisana rehetra any OU. Manorata ny resadresaka mba hahitanao ny asa rehetra misy ao amin'ny orinasa Dubai City Company
Mpanolo-tsaina ny asa any Dubai avy amin'ny experts ao OAU
Ny orinasa Dubai City Company dia mametraka ny antsipiriany ny fampiasana ny tranonkala ho an'ny fanondranana any Dubai, ahitana ny seranan-tsambo sy tranonkala ho an'ny mpanjifa any Dubai (OAU). Ny votoatin'ny lehibe indrindra - mampiasa ny tranokalam-pifaneraserana sy fampirantiana indrindra ho an'ny asa any OAU. Tsikaritra fa ny fampiasana ny tranokalam-pifaneraserana dia manome fahafahana hahazo ny asa an-tselika sy ny fampiasana ny aterineto any Dubai. Manamarina fa ny ankamaroan'ny mpiray tanindrazana hafa dia mikasa ny hahazo asa an-tserasera, ampiasaina amin'ny Internet androany maimaim-poana ho an'ny tranonkala. Na izany na tsy izany, na iza na iza, izay mitady asa, dia te-hanao asa amin'ny serasera sy mpampiasa. Alefaso ihany ny valin'ny fanontaniana lehibe iray: raha ny momba an'i Douba dia midika aminao izany?
Raha fantatrao ny etimôlôjian 'ity teny ity mba ampio ilay izy azafady araka ny toromarika misy eto. Open book 01.svg Anarana Doubabe Azonao atao ny mampiasa ny teknolojia farany indrindra ho an'ny asa. Noho izany, afaka mifandray amin'ny orinasa iray avy amin'ny orinasa misahana ny orinasam-pambolena, izay mandrindra ny solontenan'ny mpanjifa ho an'ny orinasa lehibe miasa any Oseana. Manamarina ihany koa fa ny OUI dia mametraka ny zava-bita vaovao amin'ny zava-baovao, dia ny fisehoan-javatra mampiseho ny harem-be iraisam-pirenena izay manome ny fandikana ny asa. Raha fantatrao ny etimôlôjian 'ity teny ity mba ampio ilay izy azafady araka ny toromarika misy eto. Amin'ny lafiny hafa, mba hahazoana fahombiazana, ianao dia tokony hampihatra ny fiderana bebe kokoa noho ny azy ao amin'ny firenena.
Ny asa fanaovan-gazety ho an'ny mpanjifa sy ny fikarohana ao amin'ny OAU avy amin'ny orinasa Dubai City Company
Ilaina ny manamarika fa ny soso-kevitry ny kandidà dia mandefa consulting amin'ny fanontaniana handehanana any Dubai. Ao anatin'izany fotoana izany dia misy fiantraikany amin'ny fampiasana ireo karazan-tsakafo hafa any an-kafa. Hahafantatra ianao fa androany dia misy fitaovana ampiasaina hanatsarana ny mombamomba anao ao Dubai miaraka amin'ny Dubai City Company. Amin'ny andro farany dia tena mahomby ny fitaovana ampiasaina manokana ho an'ny tranonkala ho an'ny asa izay mamoaka ny lisansa ho an'ny mpanjifa izay te-hanorina any Oseana. Natokana ho anao manokana ny fampahalalana momba ny fandevenana sy ny fandefasana mailaka ho an'ireo izay mitady asa tsy amin'ny doka ihany, ary koa any Abou-Dabiba sy any amin'ny tanàna hafa izay ho an-dry zareo tsara indrindra ho an'ny mpanjifa anao. Tohizo ny fahitanao azy mba hahafantaranao ny momba ireo tranonkala bebe kokoa.
Inona avy ireo tranonkala izay mampiasa ny finday mba hahazoana ny asa mendrika indrindra ao OAU?
Manamarina fa ny Firaisana Arabo iraisam-pirenenana dia manana ny iray amin'ireo tontolon'ny zon'ireo mpilatsaka an-tsitrapo manerana ny tontolo. Ao anatin'izany i Dubai no misy ny tanàna, izay ampiasain'ny teknolojia farany indrindra, mandray anjara mavitrika ary manokatra vaovao hafa ho an'ireo mpitsoa-ponenana avy any Rosia sy any amin'ny firenen-kafa. Raha ny marina, ny mpitsikilo rehetra izay miasa ao amin'ny Dubai (OAU) dia tsy maintsy mandoa lalàna tokana ihany - ho an'ny toerana lavitra indrindra dia tsy ilaina ny mampiasa afa-tsy ny finday sy azo antoka ireo tranonkala mba ahafahana miasa ao amin'ny OAE.
Amin'izao andro iainan'ny OUA izao dia manokatra betsaka ny asa fanavotana, raha toa ka misy ny manao ny asa fanorenana sy ny manampahefana. Tandremo sao dia misy ny fampidiram-boly ho an'ny rehetra sy ho an'ny rehetra. Tsy misy mahatsikaiky raha toa ka azonao atao ny mahita ny vola ilaina ao Dubai. Raha ny marina, toy izany koa ny fahafaha-manatsara ny fahaiza-manao. Mifanaraka tsara amin'ny fisoratana anarana amin'ny asa lehibe sy ny orinasa natokana. Manampy anay hampiasa ny tranokala Careerjet Dubai, ary koa ny Golf Gulf. Tadiavo ny momba ireo tranonkala mety hahitanao ny resadresaka. Сотни компаний публикую информацию о новых вакансиих кождый день.
Fitaovana manokana hampiasana ireo tranonkala fifaneraserana
Ho an'ny rehetra, ianao dia tokony hamela ny fisainana voasoratra ao amin'ny seranana malaza indrindra ho an'ny OAU. Мы рекомендуем всем экспатам Mampiasa ny lisitry ny tranonkala ho an'ny fananganana kariera ao OAU. Misaora an'i Jehovah, fa asa lehibe no nataony; Azonao atao ny mandray anjara betsaka indrindra amin'ny asa any amin'ny Firaisam-pirenana Arabo, na any amin'ny firenena hafa. Tsy afaka manadino ny antony mahatonga ny olona maro ho voavonjy ho an'ny besinimaro any amin'ny faritra samihafa.
Ny tanjona dia, ny any Arabia Saodita dia manana ny tanjona hafa ho an'ny mpitsoa-ponenana. Ny fanatontosana ny aterineto dia ny fananganana orinasa, indrindra ireo mpitsidika avy any amin'ny firenena hafa rehetra. Amin'ny ankapobeny, ny orinasa dia mikarakara ireo manam-pahaizana manara-maso sy manara-maso. Aza hadino ny mitadidy bebe kokoa momba ny vidim-panavotana ho an'ny mpikarakara, izay natsangana tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Arabia Saodita.
Mamintina ny fandaharam-potoana ary mamerina ny resadresaka
Hamerina ny resadresaka amin'ny site rehetra avy amin'ny lisitra
Ny nomeraon'ny 1 - lehibe indrindra ho an'ny mpanjifa - Linkedin.com
Linkedin.com - Ity no tranonkala lehibe indrindra ho an'ny mpifaninana amin'i Belzika Atsinanana. Misaotra fa ny LinkedIn dia manana ny iray amin'ireo famotsorana indrindra ho an'ny asa ary ny asa any Dubai. Hamarino fa ny LinkedIn dia namorona ny 155 milionnain'ireo mpifanandrina amin'ny tontolo rehetra. Raha ny marina, ny tranokalan'ny LinkedIn ao amin'ny 2500 dia manangana.
Tsikaritra fa ny LinkedIn dia mampiasa an-tserasera betsaka ao amin'ny orinasa, miasa ao amin'ny Persiana. Raha ny marina, ny LinkedIn dia miresaka mivantana ao Dubai, izay iray amin'ny fanamafisana ny fanamafisana ny haino aman-jery ambony izay omena ny Middle East. Raha ny fantatra dia misy ny finday LinkedIn miasa any amin'ny tontolo rehetra, ary ny orinasan'ny orinasam-panjakana dia manompo mihoatra ny 5 miliara ny vidin'ny volana. Raha ny marina, LinkedIn dia manana tranonkala ho an'ny mpizara avy any Rosia, izay te-hahita ny asa sorany any amin'ny faritra atsinanana sy any atsinanan'i Afrika. Mifampizara tranonkala iray ianao, mandray ny fidirana amin'ny banky iraisam-pirenena ho an'ny orinasa maro manerana ny tontolo.
Nahoana no alefan'ny Linkedin toy izao ny fialam-boly?
Mahatsiaro fa ny fahamaroan'ny LinkedIn any amin'ny faritra atsinanan'i Etiopia dia mitombo hatrany hatrany ny faritra afovoan'i Peris. Ny valin'ny fanoratana finday vaovao sy ny orinasa dia mamaritra ny daty. Ny Firaisambe Iraisam-pirenena misahana ny fifidianana izay alefa any OAA ihany koa dia nampiasa hampiasa ny LinkedIn. Amin'ny voalohany dia ampiasaina amin'ny fiainana vaovao ny fiainana, aorian'ny fampiasana ny fomba fiasa ao amin'ny tranonkala. Na izany aza, ny mpampiasa rehetra LinkedIn dia afaka manampy ireo hafa izay afaka manampy anao hahita ny asany ao amin'ny OU.
Fantatray fa ny hafaingan'ny firenena hafa dia te-hahita ny fomba fijeriny any an-tserasera, izay mety hiantehitra amin'ny 100 ho an'ny mpankafy 300. Ao anatin'izany fotoana izany, ny orinasam-pifandraisan-davitra dia mampiasa ny LinkedIn ho an'ireo mpiasam-panjakana ambony ao amin'ny vakansy. Mifandray amin'ny LinkedIn raha tsy misy ny fanaraha-maso an-tsoratra.
Номер 2 - один из найдушнейшего сайтов по работе в Дубае - Bayt.com
Manamarina ny zava-misy fa ny Bayt.com dia sehatra iray ahitana ny malaza indrindra sy ny fitaovana ampiasaina hanatanterahana ny asa any amin'ny faritra afovoan'i Persa. Azonao atao ny mandray anjara mavitrika amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny fiarovana ny vidin-tsolika any Belzika Atsinanana. Amin'ny teny hafa, ny serivisy Bayt.com - izany no toerana izay ahafahanao mahita asa tsara, izay tsy ho azonao omena fotoana be loatra. Ny fampiasana ny lisitry ny besinimaro, ary koa ny fanombanana 500 ho an'ny fanamafisana ireo sakana. Raha ny marina, ny serivisy Bayt.com dia nahazo ny fandefasana ny fanalahidin'ny tranonkala ho an'ireo mpanentana amin'ny taona 2017. Amin'ny teny hafa, Bayt.com dia manome fahafahana ny hanana fahafahana hanao asa ho anao. Mifidiana Bayt.com, ary tsy hotsaroana.
Tsy hanam-paharetana amin'ny tontolon'ny asa atao any OAU. Tsy misy atahorana ny orinasam-pialam-boly sy fandraisana an-tserasera, indrindra fa ny vidin'ny vacancies ao Dubava dia efa ampy tsara. Ao anatin'izany fotoana fohy izany, toa ny Bayt.com, miasa amin'ny mpividy indrindra, manome fahafahana mamaha ny tsara indrindra, mametaka fampiasana ny fomba fiasa mahazatra, ahitana WhatsApp. Azonao atao ny manamarina fa ny Bayt.com dia midika fa iray amin'ireo mpanara-maso sy nomena ireo mpanjifan-tseranam-panjakana voavidy any amin'ny faritra.
Номер 3 - Portfolio Careerjet.ae ho an'ny asa any Dubai
Azonao atao ny manamarina fa ny Careerjet.ae - ity tranonkala ity dia azo ampiasaina amin'ny mpampiasa, toy ny mpizara orinasa izay mila mpanjifa manana traikefa. Ny Portal Portal Careerjet.ae dia miezaka ny hahazo valim-panadinana ao OAU. Ao amin'ny hafa amin'ny tranonkala hafa, izay miasa ao amin'ny faritra, Careerjet.ae dia mampiseho ny rafitra rafitra ho an'ny mpandraharaha, ary ny seranan-tsambo izay manome alalana ny mpanjifa, ary ny orinasa dia mahita ny fahafaha-midinika, azo ampiasaina amin'ny asa fitantanana. Raha ny tokony ho izy, afaka mampiakatra ny vokatra azo avy amin'ny Careerjet.ae izay ahafahana manatanteraka ny asa sy ny fampandrosoana, ho an'ny tombontsoan'ny Firenena Mikambana, izay manana ny fahaiza-manaon'ny IBA.
Ny iray amin'ireo valin'ny tranonkala dia manana ny safidy malalaka misokatra amin'ny vakansy. Ao amin'ny tranonkala, dia misy ny orinasa mpamatsy vola miasa any Dubai. Ao anatin'izany fotoana izany, ny Portaler Careerjet.ae dia manome ny safidiny indrindra amin'ny faritry ny OAU rehetra. Ny Campaigns dia mampiasa ny Careerjet.ae mba hamoahana ny valinteny farany indrindra. Tandremo sao dia Careerjet.ae dia iray amin'ny vohikala natokana ho an'ny tokantrano ao Dubrai ho an'ny mpiray tanindrazana, na ho an'ny fampiratiana.
Manana karazana portfolio ve ny CareerJet mba hahita asa any Oseana?
Raha ny hevitr'ireo mpitsidika any Dubai, mifanohitra tanteraka amin'ny mpitsidika, indrindra ny mpitsidika, ny fomba lehibe indrindra amin'ny fampiasana ny tranonkala ho an'ny asa dia manana ny lanjany lehibe sy tsara indrindra ho an'ny mpilatsaka an-tsitrapo. Azonao fafaina na ovaina ao amin'ny Toeran'ny mpandrindra ity lahatsoratra andrana ity. Ny tranonkala dia manome toerana betsaka tahaka ny any Dubai, ary ny OU afovoan-tany.
Ny tena mahazatra indrindra dia ny karatra CareerJet no iray amin'ireo faran'izay tsara indrindra amin'ny asa, dia ny hoe ampiasain'ny olona mampiasa ny 80 hafa. Raha ny marina, ny tranonkala manontolo dia mihoatra lavitra noho ny fiteny 30, izay mamela azy mora ampiasaina ho fampivoarana ny karatrao. Azonao atao ny mandray anjara eto amin'ny Wikipedia amin'ny teny malagasy Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny esperanto Ohatra tsy ampy amin'ny teny esperanto
Номер 4 - портал портал для трудоустройства в Дубае - Dubizzle.com
Ao amin'ny tranonkalan'ny Dubizzle no misy ny 5635 vaovao hafa izay afaka manatsara ny fahaiza-manao hanatsarana ny karama farany ambany ao amin'ny OAE. Na izany aza, ny habaka manerantany dia maneho ny vaovao farany amin'ny orinasa, miasa any amin'ny Faritra atsinanana. Amin'ny fotoana farany, raha toa ianao ka afaka manokatra ny fahafahan'ny tsirairay miasa ao Dubai, ianao dia manazava tsara ny zavatra nosoratan'i Dubizzle. Azonao atao ny mandray anjara eto amin'ny Wikipedia amin'ny alàlan'ny fanitarana azy. Manamarina ihany koa fa maro amin'ireo vondrona iraisam-pirenena no mampiasa ny Dubizzle ho toy izany, raha toa ka tafiditra amin'ny famandrihana ny vaovao amin'ny vohikala malaza momba ny vaksiny.
Tsindrio ny fahitanao fa ny Dubizzle dia ampiasaina amin'ny fahamendrehana ho an'ny mpividy. Raha ny marina, ny fampirantiana avy any Rosia dia afaka manatsara ny fomba fiasa nomeny anarana ao Dubai, izay manome toro-hevitra ho an'ny fampiasam-bola, ary koa ny fametrahana angona. Raha izao no mitranga any OAU, dia afaka mametram-panafarana ny andro iray manontolo amin'ny famaranana.
Hahita isika fa tokony hanangana tranokala any amin'ny sehatra ara-bola nomena anarana ao Dubai. Tsy misy mahasamihafa anao izay tianao hampiasa tsara kokoa ny seranan-tsambo any amin'ireo mpitsoa-ponenana any Dubai. Manazava fa ny tsirairay amintsika dia miompana amin'ny asa-tànana sy ny fametrahana ny orinasa, ny orinasa natokana ho an'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany. Na izany na tsy izany, izay manangana tranokala ao amin'ny sehatra ara-bola, dia tokony hanamarika fa ny Dubai dia manana ny toerany tsara indrindra ho an'ny asa. Ho an'ity lahatsoratra ity, dia azo adika ihany koa ny manoratra momba ny fandefasana ireo profesionera avy amin'ny karazan-javatra maro samihafa erantany, ny fanandramana sy ny fomba amam-panaovana azy eo amin'ny sehatry ny profesionaly.
Ny tena mahasamihafa ny mpilatsaka hofidiana dia tsy afaka manamarina fa ny fahombiazan'ny fampivoarana ny banky dia tsy maintsy mandoa ny tanjona izay ny mpitantana na ny mpanolotsaina. Ny orinasa lehibe ao amin'ny orinasa dia hanampy anao hampivoatra ny fanatanterahana ny rafitra rehetra. Ho an'ity ianao dia hampiasa ny fampahalalana rehetra sy ny zava-misy iainanao. Raha te hanana asa an-tserasera ianao ao OAU, dia manorata any amin'ny toerana misy anao.
Tadiavo Fikarohana Fandraisana Fiovana farany Pejy vaovao Vaovao Pejy kisendra Hanamboatra takelaka Fandraisan'anjara Tetikasa arivo Fitsipika
Nolazaina fa tsy ilaina ny manamarika fa ny mpiasan'ny orinasa dia lehibe amin'ireo mpilalao ara-tsosialy ao Dubava, ny solontenan'ireo orinasa tsy mankasitraka ny fiaraha-miasan'ny "tondra-drano", miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny rafitra efa misy hatramin'izay, mba hahazoana tombontsoa amin'ny tontolom-bolongana maro manerantany. Hamarino fa ho an'ny fahasalamana ara-pahasalamana any amin'ny sehatra sehatra ianao dia afaka maneho ny fahafaham-po ho an'ny tontolo iainana sy ny mpanana. Miantsoa sy ampifamadiho, ary alefaso any amin'ny eFinancial Careers ny tranokalam-pifandraisan-davitra, mba hahitana tsara indrindra ny asa fisorohana sy ny ara-ekonomika.
Ny mpiasan'ny eFinancial Careers dia afaka manampy olona maromaro izay te hahita asa any amin'ny orinasa lehibe indrindra any Oseana. Raha ny marina, dia efa nilaza ny andro rehetra hiainan'ny mpilatsaka an-tsitrapo. Raha te hanana tokotokony ho anao manokana ianao, mifandraisa amin'ny eFinancial Careers, mavitrika amin'ny tranonkala, mba hialana amin'ny sehatr'asa rehetra. Eo am-piheverana, dia mitarika anao amin'ny tanana izany.
Nombre 6 - portable amin'ny Indeed.com ho an'ireo izay mitady asa any Dubai
Портал In-depth leader in the search engine, as well as the best-in-time system for business. Tadiavo ny fanaraha-maso izay ny portable Indeed dia manome ny safidy tsara indrindra ho an'ireo mpamatsy vola avy any Rosia, izay te-hahita ny asa sorany ao OAU. Tsy misy mahasamihafa ny fahafahan'ireo mpitsidika ny Jobs Indeed handray ny fanampiana sy fampaherezana. Mampiasa tsotra izao fanontaniana izao mba hahitanao ny fampidiran-drakitra ny fahafahana miditra malalaka. Ny fandefasana ny fidirana amin'ny aterineto sy ny serivisy fampiasana ny finday dia ny Indeed Jobs no iray amin'ireo nalaza indrindra eran'izao tontolo izao.
Ny orinasa miasa any an-tokantrano dia misintona an-tapitrisany maro. Eny, ohatra, ianao dia afaka manao asa any Katara, Arabia Saodita ary any Egipta. Ny fanomezam-pahasoavana an-tserasera ny tranonkalan'ny tranonkala, ny fandrakofana tany Doubs dia nivadika ho tsotra sy tsara. Ny Siansa avy any Rosia dia afaka mahita ny karazan'antokom-panafahana manokana, ary koa ny mahita fa voatanisa ho an'ny fandaharam-potoana ara-potoana ao amin'ny orinasa. Amin'ny toe-javatra hafa, afaka mametraka ny vacancies any amin'ny sehatra maro ianao. Ny lisitry ny fanomezan-dalàm-panorenana dia atao isan'andro, ka izany no ahafahantsika mitodika any amin'izay mety ho lozam-pifamoivoizana anananareo.
Nahoana no mbola ampiasaina ihany ny tena?
Toa manamarina fa ny seranan-tsambo dia mamela ireo mpividy indrindra ao amin'ny sehatra ara-bola sy ara-ekonomika. Mampiasà fomba fiasa mba ahafahanao miasa ny mombamomba anao. Mandritra ny fotoana rehetra, dia tadidio fa ao anatin'ny fandaharam-potoanao dia tokony hiresaka momba ny fampahalalam-baovao ianao ary handinika ny asa. Manorata fampisehoana amin'ny fifanakalozana fampiratiana sy ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny sehatrasa fanaraha-maso, izay mety hahafahana manasitrana ny mozika rehetra. Azonao atao ny mandray anjara eto amin'ny Wikipedia amin'ny alàlan'ny fanitarana azy. Manorata ny resadresaka ao amin'ny tranonkalanao, ary soraty amin'ny tolotra omenao ny tolotra omenao ny tolotra omenao.
Tsindrio ny fihainoana an-telefaona tsotra sy mora ampiasaina, izay ahafahana mandefa ny vacancies any amin'ny toerana iray. Ny orinasan-tserasera dia manolotra any Dubai, izay manolotra ny seranan-tsambo ho an'ny fitaovana lehibe indrindra ho an'ireo izay te-hanangana ny fiainany any Oseana. Ny seranan-tsambo dia afaka mampiasa ny lehilahy sy ny vehivavy. Просто загрузите вашей резюме, і найдите работу вашей мечты.
Nombre 7 - Portable Gn Career sy Getthat.com
Toa manamarina fa amin'izao fotoana izao dia misy marika lehibe amin'ny portals ho an'ny asa any Dubai. Ireo tranonkala, tahaka ny GNcareers sy GetThat.com dia mahafa-po sy tsotra amin'ny fampiasana fitaovana ampiasaina ao amin'ny OAE. Ny Portal GetThat dia manome ny tranonkala ho an'ny tranonkala izay natsangana manokana ho an'ny mpizara sy mpiara-miasa ao amin'ny United Arab Emirates. Tadiavo ny fomba ahafahanao mahita ny lisansa ao amin'ny OAE amin'ny sigara rehetra. Hamarino fa ny mpandray anjara dia manomboka amin'ny 5000 vaovao farany isan-kerinandro. Raha te-hanangana ny tranonkalany ianao dia afaka maka ny tranonkala GetThat, izay omenao voninahitra ny fiantsoana iray avy amin'ny fitaovana maro ho an'ny asa any Dubai.
Tondroy ny hevitra fa ny GetThat dia nahazoan-dàlana manokana ho an'ny orinasa izay miasa ao Dubai. Amin'ny ankapobeny, ny tranokalam-pifaneraserana dia manome fahafahana ho an'ny fahafahana miditra ao amin'ny tranokalam-pifandraisan-davitra indrindra. Azonao atao, ohatra, ny mampiasa ny seranan-tsambo ho an'ny vaovao farany. Aza hadino ny safidy, ary asio fampisehoana lehibe ho an'ity tranonkala lehibe ity.
Номер 8 - The Best Path to Work In The Persian Gulf - GulfTalent.com
Tsikaritra fa ny GulfTalent.com dia nanam-pahefana nahazoam-bokatra indrindra tamin'ny asa fitoriana tany Dubai. Ho an'ny rehetra, talohan'ny fampiasana ny GulfTalent.com dia tokony hanamarina fa ny iray amin'ireo orinasa lehibe indrindra ho an'ny orinasam-pampandrosoana, izay an-tserasera dia manomboka amin'ny tambajotra sosialy. Raha ny marina, dia ampiasaina bebe kokoa amin'ny 6 mpiasan'ny mpiasan'ny OU. Raha te-hiditra amin'ny asa ianao, dia azonao atao ny manamarika fa ny GulfTalent.com dia manolotra ny lisansa ho an'ny sehatra rehetra sy ny orinasa. Na izany aza, mila dinihina fa ny GulfTalent.com dia manana ny fitaovana maimaim-poana ho an'ireo mpikarakara izay te-hahita ireo mpilatsaka an-tsitrapo ao amin'ny faritra.
Amin'izao fotoana izao, GulfTalent.com dia ampiasaina amin'ny mpampiasa hafa ireo firenena hafa. Ho an'ny androany, ny 92 000 dia manolotra amin'ny vidiny, izay GulfTalent.com ihany no iray amin'ireo vavahadim-pifandraisana maimaim-poana. Tamin'ny faha-2005 taona, ny GulfTalent.com tranonkala dia niova ho iray amin'ny fitaovana lehibe indrindra ho an'ny orinasa sy orinasa avy any Dubai, avy any Abu Dhabi. Amin'ny tranonkala rehetra, ny GulfTalent.com ao amin'ny sera dia tsy afaka mampiasa izany, ary ampiasaina ny fanatsarana ny asa ho an'ny asa izay misoritsoritra fotsiny ny hatsaran'ny asa. Toa manamarina fa ny GulfTalent.com dia mitodika amin'ny fisoratana anarana amin'ny haino aman-jery sy ny haino aman-jery.
Manantena ny hisafidy ny GulfTalent ve ianao?
Aleo mieritreritra fa ny GulfTalent.com dia manana ny iray amin'ireo finday lehibe indrindra ho an'ny orinasa any Oseana. Ny tranokalam-pifaneraserana amin'ny tranonkala dia manara-maso ireo manerantany miasa any Dubai. Tazomy ny zava-misy fa ny GulfTalent.com dia miasa tsy misy na inona na inona ary miaro ny mpanjifa izay manana programa maro avy amin'ny fiteny maro samihafa.
Ny orinasa, miasa amin'ny sehatra teknolojia, fikambanana ary ny fampiroboroboana, dia mampiasa ny GulfTalent.com. Hifandray am-pahibemaso ny safidy malalaka, ny GulfTalent.com tranonkala dia manana fitaovana maimaim-poana ho an'ny mpikaroka avy any Rosia sy ny firenena.
Ny SMS 9 - tranokala vaovao KhaleejTimes.com ho an'ny asa
Tsy fantatra na dia efa fantatra aza, na izany aza, ny gazety voalohany ao amin'ny OAE dia efa nomanina ho an'ny tranokalam-baovao ho an'ny mpikirakira any amin'ny seranana iraisam-pirenena. Azonao atao ny manamarina fa ny WhatsApp rafitra nampiasaina dia nampifandanjaina ny fampahalalana vaovao. Ny fandefasana hafatra maromaro momba ny fampahalalam-baovao sy ny vaovao farany dia manome ny Khaleej Times an-tapitrisany lavitra ho an'ny mpamaky. Ny Khaleej Times dia mamaritra ny vaovao farany ary manome ny filokana ho an'ny mpizara. Ao amin'ny tranokalan'ny Khaleej Times dia misy ny fampahalalana vaovao momba ny vaovao farany any an-tanàna, ary koa ny toetrandro.
Manantena ny Khaleej Times ve ianao?
Nanazava fa ny Khaleej Times dia nahatonga ny tsy fahafahana tsotra sy mahasarika ny design. Ny fanamafisana ny tranokala Khaleej Times dia manome fahafaham-po ny fanapahan-kevitr'izy ireo ho an'ireo izay tratry ny tsy rariny ao Dubava. Raha ny marina, ny orinasa ao Dubai dia mety ho tafiditra ao anatin'izany, fa tsy manadino ny vaovao momba ny vacancies.
Tsindrio ny fandraisan'anjaranareo izay tsy dia lavitra loatra ny seranan-tsambo ho an'ny mpanjifa, ary ny famoahana ny vaovao farany izay miasa amin'ny OEE rehetra. Ny fanehoan-kevitra Khaleej Times dia mamoaka vaovao avy amin'ny faritra rehetra eto an-toerana, ary manatsara ny fampahalalana momba ny vaovao farany indrindra, izay mety hampiahiahy ny andro farany.
Номер 10 - MonsterGulf.com ho an'ny tranonkala ao OAU
Na izany aza, tahaka ny hafainganam-pandehan'ny asa any Dubba, ny Golf Gulf dia manana ny iray amin'ireo mahasamihafa fanapahan-kevitra mba hiasana amin'ny asa, raha toa ka manoritra ny fomba fiasa any amin'ny faritra atsinanan'ny Ranomasimbe. Ny Gulf Monster dia mampifandray ny faratampony sy ireo orinasa mpikarakara any amin'ny faritra. Tsy misy dikany ny zava-misy, fa ny Gulf Monster dia miseho amin'ny Google mihitsy ny Google. Tsy mila mijery ny port of monster Gulf Monster, fa tena maka tahaka ny fomba fiasa, toy izany koa ny mpilatsaka an-tsitrapo. Ity dia maneho betsaka kokoa ny valin'ny fandefasana izay misy ny asa atao any amin'ny faritra samihafa.
Miankina be dia be ny mamaritra ny fifandraisana amin'ny samy mpilatsaka an-tsekoly amin'ny tontolo rehetra. Azo ampiasaina bebe kokoa amin'ny mpividy indrindra ho anao manokana ny orinasa, raha toa ianao ka miasa ao anatin'ny sehatr'asa miaraka amin'ny mpizara Monster Gulf. Raha ny marina, ny Gulf Monster dia mampiasa ny iray amin'ireo fitaovana farany indrindra any Oseana. Ny tranonkala dia afaka mampiasa ireo avy any Rosia sy ny seranan-tsambon'i Toamasina ho an'ny asa fanoratana ny mombamomba anao ao amin'ny doba teratany Dubai.
Nombre 11 - vohikalam-pitenenana manontolo eo amin'ny TotalJobs.com
Toa manamarina fa ny Total Jobs dia manana iray hafa amin'ny sehatr'asa manokana ho an'ny asa any Dubai. Ity tranonkala ity dia natao tao amin'ny seraseran'ny United Kingdom, ary nahazoana alalana avy amin'ny mpikirakira ny serasera rehetra. Ny tolotra isan-kerinandro ho an'ny mpampiasa vola dia mampiasa ny seranan-tsambo ao amin'ny total asa ho an'ny asa fanavotana tahaka ny ao amin'ny Kolejim-paritra, eny ary ao amin'ny OAE. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny seranan-tserasera, ny Total Jobs dia mampiasa ny karazana populaire ho an'ny mpikirakira aterineto manerana ny tontolo, izay ahafahana miditra ao amin'ny 100 000 Real Wallpapers sy ny Resadresaka. Azonao atao ny mandray anjara eto amin'ny Wikipedia amin'ny alàlan'ny fanitarana azy.
Ny valin-kafatra rehetra dia samy mampiasa ny tranokala ho an'ny mpanjifa vaovao. Raha ny marina, ny fidiram-bola ankapobeny ho an'ny famoahana dia manomboka amin'ny fisoratana. Ny volana martsa dia misaotra ny serivisy 2,5 isam-bolana. Hamarino fa ny Total Jobs dia mampiasa ny tambajotra lehibe, izay manome azy ny safidy fitaovana ho an'ny tombontsoan'ny firenena Rosiana sy ny firenena.
Etsy ankilan'izany, ny volo maitso maitso dia manome fahafaham-po ny faniriana tsara indrindra, izay ampifandraisina amin'ny rafitra fiasan-drakitra ho anao. Ny fonosana finday manontolo, ny orinasa dia manome antoka ny fahafaha-miasa amin'ny asa.
Hanolotra anao ny adiresy fanadihadiana momba ny asa ho an'ny mpifindra monina. Eo am-pandehanana ianao dia afaka mahita tsara indrindra amin'ireo orinasa vahiny sy mpandraharaha. Ny vondrona rehetra ao Dubava sy Abou-dia dia mamoaka ny vaovao farany momba azy io. Raha ny marina, ny seranan'i DubaiClassifields.com dia manolotra ny orinasa any amin'ny faritra samihafa sy ny sehatra.
Raha vao misy, dia misy ny mpampiasa miasa, mampiasa ny seranan'i DubaiClassifields.com mba hamoahana ny vaovao farany. Azonao atao ny mandray anjara ianao Ampiana ao amin'ny zava-misy-misy ao amin'ny tranonkala. Ary amin'izany dia hevero tsara faingana toy izany hianareo; fa aoka ny olona rehetra samy handeha araka izay anjarany avy. Ity tranonkala ity dia tena tsara tokoa ho an'ny fampirantiana avy amin'ny Rosia sy ny CST, izay te hanorina ny mpilalao sarimihetsika ao Sharjah.
Ny SMS 13 - adiresy TotalDubai.com
Tadiavo ny fanaraha-maso fa afaka mampiasa TotalDubai ianao mba hahita tombontsoa manokana amin'ny asa fitadiavam-bola. Azonao atao ny manamarina fa ny TotalDubai dia misokatra amin'ny adiresy am-bava, izay manana ny laharana ambony indrindra. Tsy ho vitanao ny hampiditra ny fisintonana ity tranonkala ity ary hiditra ao amin'ny totalDubai ao amin'ny seranan-tsambo. Ny totalin'ny totalDubai dia manana ny fahafahana mamoaka publications vakinteny. Mifidiana TotalDubai raha toa ka manamboatra asa maoderina any Dubai na Abou Dhabi.
Tadiavo ny fanamarihana fa ny site-nao dia tsy misongadina betsaka kokoa noho ny vidim-panavotana, izay tsy dia mahafa-po noho ny antony, satria mety afaka mandamina ny fampidiran-draharaha rehetra. Misaotra ny TotalDubai safidy ary manoratra ao amin'ny tranonkala. Raha fantatrao ny etimôlôjian 'ity teny ity mba ampio ilay izy azafady araka ny toromarika misy eto.
Номер 14 - портал NaukriGulf.com - популярный инструмент для пошуку работы
Manamarina izany fa ny NaukriGulf dia manana ny iray amin'ireo fitaovana maoderina ho an'ny asa soratra amin'ny teny rosiana. Ny Port NaukriGulf dia mampiasa ny tsy fahampiana populaire amin'ny vahiny sy ny expat. Ankoatra izany, dia misy solontenan'ny orinasa misahana ny orinasa, natsangana tany Katara, Arabia Saodita, Bahrain ary Oman. Raha mampiasa ny NaukriGulf ianao, dia afaka mahita ny karazana vidin-tsarimihetsika marobe any amin'ny faritra rehetra any Oseana.
Amin'ny lafiny rehetra, ny NaukriGulf ao amin'ny seranan-tsambo dia iray amin'ireo lehibe indrindra amin'ny tranokalam-pifaneraserana, raha toa ianao ka manana ny toetr'andro sy ny fandaharan'asa momba ny asa any Perisia. Ny fampiasana ny firenena samihafa indrindra dia mampiasa ny NaukriGulf ho an'ny orinasa, ka amin'izany, ny NaukriGulf dia manome fahafahana tena tsara sy tsotra amin'ny fampiasana fampiharana.
Manampy ihany koa, fa ny NaukriGulf dia mampiasa ny be mpampiasa indrindra amin'ny mpizara izay manolotra ny fahafaha-miditra bebe kokoa amin'ny 1 an'arivony farafaharatsiny izay nalefan'ireo orinasa lehibe indrindra. Ny mpiserasera dia milaza ny momba ny tranonkala NaukriGulf ary ny fampiharana an'i NaukriGulf, izay mahafinaritra ny fanehoan-kevitra.
Azonao atao ny mandray anjara eto amin'ny Wikipedia amin'ny alàlan'ny fanitarana azy. Raha ny marina dia manana ny tanjona avo indrindra amin'ny fampiasana ny tambazotra rehetra momba ny asa any Oseana.
Ny nomeraon'ny 15 - ny Portality Authorityjob.com ho an'ny toeran'ny mpanohitra
Azonao atao ny mandray anjara eto amin'ny Wikipedia amin'ny alàlan'ny fanitarana azy. Jereo koa ny pejy Ahoana ny manao takelaka rehefa te-hijery hoe ahoana no fanaovana azy. Amin'ny teny hafa, ny tranonkala dia manome fahafahana miditra amin'ny vakansy rehetra amin'ny serasera rehetra amin'ny 7 emirates. Azonao atao ny mandray anjara eto amin'ny Wikipedia amin'ny alàlan'ny fanitarana azy. Ao amin'ny tranonkalan'ny tranokala 5000 no misy ny valiny. Azonao atao, ohatra, ny manodina ny geografia mitady ny tanànanao, ohatra, ny fandraketana an-tsoratra fotsiny eo amin'ny vakansy, nafenina tany Abou Dhabi.
Ity tranonkala ity dia iray amin'ny fanatsarana ny rafitra ho an'ireo izay mitady asa any amin'ny orinasa. Raha te-hanorina any amin'ny orinasa iray miasa any amin'ny faritra ianao, dia azonao atao ny misafidy ity site ity. Ao anatin'ity tranonkala ity dia misy fahamendrehana. Ny mpampiasa indrindra mpampiasa dia mampitombo ny fahaiza-manaonao amin'ny asa, ary koa ny fahavitan'ny fifaninanana.
Номер 16 - portail amin'ny JobhuntGulf.com
Alefaso ny fanamafisanao fa ny JobhuntGulf.com dia ho lasa be lavitra indrindra any amin'ny faritra atsinanan'i Avaratra. Ity tranonkala ity dia mampiasa io fialantsasatra io, toy ny andrana hafa ho an'ny orinasa any Oseana. Ny tranokalam-pifandraisan-davitra no manolotra ny vala avy amin'ny orinasa miasa any amin'ny Perceana. Raha ny marina, ny tranonkala dia manome ny serivisy iraisam-pirenena ho an'ny olom-pirenena Rosiana sy ny SIS. Ny sampan-draharaha misahana ny fifandraisana dia miankina amin'ny famolavolana ny famerenana, ary koa ny fisoratana anarana. Ity no lahatsoratra voalohany ao amin'ny blaoginao. Azonao atao ny mandray anjara eto amin'ny Wikipedia amin'ny alàlan'ny fanitarana azy.
Tsy misy mahatsikaiky fa ny tranonkala dia iray amin'ireo singa manan-danja mba ahafahanao manamboatra ny mombamomba anao ao an-tokantrano.
Номер 17 - portable Dubaicareers.ae ho an'ny vondron'ny fanjakana
Hanomboka hametraka ny fanaraha-maso ao amin'ny seranan'i Dubai Careers izay ahitana ny iray amin'ireo fitaovana entina hanatsarana ny asa ao amin'ny OAE. Ity tranonkala ity dia natonta tamin'ny programa manokana momba ny fitantanana ny governemanta. Manamarina fa ny seranan-tserasera dia tsy mampiasa betsaka amin'ny tranonkala ara-tsosialy, fa amin'ny alàlan'ny fanorenana ny fampiasana ny teknolojia vaovao indrindra, ary mamela ny mpiasan'ny fahasalamana hahazoana fahafahana miditra an-tsokosoko any amin'ny governemanta iraisam-pirenena.
Ny Porta Dubai Careers dia nanamafy fa ny teny fanovana dia nanova ny toeram-pitsaboana tany Dubai, nandroso azy tao amin'ny iray amin'ireo toerana malalaka sy tranonkala ho an'ny fiainana. Amin'ny lafiny rehetra, ny seranam-piaramanidin'i Dubai dia ho tsara indrindra ho an'ireo izay te-hahita asa any an-tanindrazana amin'izao fotoana izao, raha ny marina, raha fantatrao, raha ny tokony ho izy dia tokony hampiharina.
Ny tranokalam-pandaminana Dubai dia manomboka amin'ny karazana loko rehetra, izay mampitombo ny fampiasana azy. Raha ny marina, ireo mpiasa dia afaka mahazo ny fampiasana ny rafitra tsotra ho an'ny vondron'olona isan-karazany, tafiditra ao anatin'ny iray amin'ireo seranan-tserasera.
Raha sanatria manangona vola ianao, na mividy an'arivony, raha tianao ny hahita ny asa sorany, dia azonao atao ny manoratra ao amin'ny tranokalan'ny Dubai Careers izay anisan'ny seranan-tseraseran'ny tranokalam-pifaneraserana izay efa navoakan'ny vaovao farany.
Ny nomerao 18 - tranokala Edarabia.com ho an'ny asa fanabeazana any amin'ny faritra atsinanan'i Belzika
Eo am-pelatanana, manamarina fa ny seranam-piaramanidina Edarabia dia ampiasaina ho an'ny fitaovana ho an'ny sekoly ambaratonga faharoa, mpandrindra ary fikambanana hafa any OAU. Ny fanabeazam-bavaka an'i Edarabia dia maneho ny valin'ny 500 amin'izao fotoana izao. Raha mampiasa ny tranokalanao ianao dia afaka mahita asa any Dubai na Abou Dhabi, ary koa any amin'ny faritra hafa any Oseana. Ireo vaovao avy amin'ny tranokalam-pifandraisana dia manome ny fahazoan-dàlana ahafahana mahita ny lisansa ho an'ny famolavolana drafitra, ny rafitra, ny mpandraharaha ary ny fandraisana an-tanana.
Ny orinasam-pifandraisana an-jatony dia mampiasa ny portfolio-n'ny serivisy, ary ny Edarabia ihany no tompon'antoka amin'ny famerenana ny repoblika. Manamarina ihany koa fa ny asa rehetra dia mandeha amin'ny famerenana amin'ny laoniny, hany ka tsy mety hikorontan-tsaina. Mianara mieritreritra ny tranonkala Edarabia, ary tadiavo ihany koa ny hahita ny lisitry ny sainao.
Raha mampiasa ny tranokalanao ianao, dia afaka manokatra varavarankely vaovao momba ny faritra misy an'i Dubai. Ao amin'ny tranonkalan'ny famoahana an-tsarimihetsika momba ny tanàna, ary koa ny fampahafantarana momba ny faharetan'ny visa. Raha ny marina, afaka mamantatra ny tontolon'ny asa any amin'io tanàna io ianao. Ny fanatontosana ny tranonkala dia tsy misy 10 000 vakansy. Raha toa ka adidinao ny fahaiza-manao, dia manana ny safidinao amin'ny fanandramana asa ianao.
Izay rehetra tadiavinareo dia ho hitanao ao amin'ny tranonkalanao ary hametraka ny antsipiriany vaovao. Raha ny marina, dia afaka mampiasa ny rohy ianao amin'ny lohahevitra lehibe indrindra ho an'ny sokajy. Azonao atao ny mahita ny lisansa ho an'ny mpanjifa mpaninjara ambony, ny orinasa marika, ary koa ny asa ao amin'ny sehatry ny indostria. Ny fanadihadiana dia manamarina fa ny seranan-tsambo dia misy ny fitaovana entina hanatsarana ny asa ao Dubai.
Номер 20 - портал MEPJobGulf.com ho an'ny asa ao amin'ny sehatr'asa
Hanamafy ny fisainanao, izay ny MEPjobGulf dia manana ny haingon-tsakafo manokana. Ny adidin 'ny tolotra an-databatra - fanaraha-mason'ny mpiasam-panjakana ho an'ny asa ao amin'ny sehatr'asa. Manamarina fa ny sehatry ny sehatra dia misy iray avy amin'ny sehatra mampivelatra any amin'ny faritra atsinanan'i Belzika. Izany hoe, ny MEPjobGulf dia miasa amin'ny taona 2014, ary ny tena zava-dehibe dia ny fisoratana anarana amin'ny OEO sy ny firenena.
Ny MEPjobGulf amin'ny seranan-tserasera dia tsy ampiasaina amin'ny fisoratana ao amin'ny sehatra sehatrasa, ary koa ho an'ny orinasa izay mikarakara ireo mpampiasa. Amin'ny ankapobeny, ao anatin'ity faritra ity dia tena sarobidy ny mpandray vahiny. Azonao atao ny mampiasa ny mombamomba ireo mpampiasa anao, azonao ampiasaina ny MEPjobGulf. Ny adiresy imailaka dia tsy maintsy ampiasaina amin'ny solosaina manokana.
Raha toa ianao ka manana mpanjifa manokana, ary mahalala ny rafitra rehetra sy ny orinasa, ianao dia misafidy ny MEPjobGulf. Ny MEPjobGulf dia afaka mamita ny asa ataonao, ary mametraka ireo fifanarahana amin'ny tranonkala.
Номер 21 - porta Expatwoman.com
Ny portatin'ny Expatwoman dia manome ny hevitry ny vaovao farany. Tsy vitan'ny hoe ny tranonkala ofisialy voafidy ao OAU, dia ny fametrahana ny vaovao ho an'ny vehivavy avy amin'ny firenena samihafa, tafiditra ao amin'ny Rosia sy ny SIS. Портал Expatwoman сделан женщинами для женщин. Raha ny marina dia ny fitantanana ny seranam-piaramanidina dia manara-maso ny fihaonana mifandraika amin'ireo mpanjifanao any Dubai. Raha ny marina, ny seranan-tsambo dia manome fanampim-panazavana sy fampaherezana amin'ny famoahana sy fampirantiana ny resadresaka ho an'ny vehivavy izay te-hampandroso ny asa any Dubai.
Tadiavo ny fanamarihana fa ny 15 taona fahita any amin'ny seranam-piaramanidina dia afaka nanova ny toeran'ny tranonkala ho an'ny profesionôna. Ny serasera portable dia manampy anao amin'ny asa fampandrosoana any Dubai sy Abu Dhabi.
Номер 22 - port Reed.co.uk
Jereo ny tranonkala britanika mba hitadiavam-bola any Dubai. Tadiavo ny fanamarihana fa ny tranonkala dia manana ny tsara indrindra amin'ny rafitra an-tserasera amin'ny tambazotra. Raha ny marina, ny orinasa lehibe indrindra avy any Amerika dia mampiasa izany amin'ny alàlan'ny Reed.co.uk, izay lehibe indrindra amin'ny vaovao. Ny orinasa vahiny, miasa any Dubai, ary ny fampirantiana ny adiresy an-tserasera dia mihamitombo hatrany.
Ao amin'ny tranonkalan'ny Reed.co.uk no misy ny 500 voavolavola any Dubai, ary ny iray amin'izy ireo dia mahaliana. Raha te-hahalala ianao, dia azonao atao ny mandefa ny resadresaka ao amin'ny Reed.co.uk. Izany no mahatonga izany, raha toa ka te-hahita asa tena tsara hatao any Dubai ianao. Ny maro hafa koa dia tsy afaka maneho fa ny Reed.co.uk dia mamela ny asa any Dubai.
Номер 23 - tranokala Glassdoor.com
Ankoatra izany, dia misy ny tranonkala ho an'ny efa ela sy tsara indrindra ho an'ny asa any OAU. Miantehitra amin'ny fampiasana ny habetsaky ny tranokala Glassdoor. Ao amin'ny tranokala Glassdoor dia miezaka mafy mivoatra sy mivoatra, manome ny tsara indrindra ny orinasa mpanampy amin'ny sehatry ny asa. Ny banky amin'izao fotoana izao, Glassdoor, dia manolotra ny ankamaroan'ny orinasa misahana ny orinasa maneran-tany. Tamin'ny androany, ny Glassdoor dia miasa am-pahibemaso ao amin'ny OEO, raha vao nanomboka ny fampihetseham-po dia efa ho dimy taona izao.
Ho an'ny mpampiasa, dia afaka mahazo ny fampahalalana momba ny informatika momba ny orinasa. Azonao atao ny mandray anjara betsaka amin'ny fampahalalam-baovao isan-karazany, ary afaka manamarina izany. Azonao atao ny mandray anjara betsaka ofiotran'ny mpampiasa vola, ary ampiasaina ihany koa ny Glassdoor ho an'ny fananganana drafitra. Hametraka fanontaniana ary hametrahana fanontaniana momba ny orinasa tsirairay avy. Ny Glassdoor dia mampifandray betsaka kokoa amin'ireo mpirotsaka an-tsehatr'i Rosia sy ny CST.
Номер 24 - port Hopscotch.ae
Hanolotra anao ny rindrambaiko manokana ho an'ny vehivavy miasa any Dubai. Raha toa ianao ka miasa ao amin'ny Persiana, ary tiako ny hahita ny toerana vaovao, dia asehoy ny fanamarihana Hopscotch.ea. Ity tranonkala ity dia mampiseho ny vaovao tena marina ho an'ny vahiny any amin'ny faritra atsinanan'i Belzika.
Azonao atao ny misafidy ny iray amin'ireo valan-tserasera voatanisa ao amin'ny Hopscotch.ea. Raha ny marina, Hopscotch.ea dia mampiasa betsaka kokoa noho ny sangan'asa avy any Rosia sy ny CST. Jereo tsara ny mpitantana raha te hanoratra momba ny rafitra.
Nombre 25 - Portable JustLanded.com ho an'ny doka any Dubai
Ny Portalland Justlanded.com dia natsangana manokana ho an'ny fampiratiana. Tsy voatery hilaza ny momba ny olona izay tsy navela ho any amin'ny firenena hafa, fa tsy afaka manapa-kevitra amin'ny rehetra. Amin'ny ankapobeny, amin'izao fotoana izao dia sarotra ny mahazo vaovao vaovao momba ny fampiasana sy ny fampiharana. Ny Portalland Justlanded.com dia nanangana ny taona 2003 miaraka amin'ny fanamafisana ireo tolotra izay alefa any amin'ny firenena hafa.
Manana fiainana an-taonany maro ny olona velona 170, mianatra sy miasa ho an'ny fianakaviany. Ny tranonkala dia manome ny antsipiriany momba ny fampahalalam-baovao na ny fomba rehetra ahafahanao mijanona mandritra ny fotoana handehanana any amin'ny "Arab world". Raha ny marina, ny Portlandy Justlanded.com dia mampiasa ny fitiavan-karena amin'ny vahiny.
Ampio, izay ampiasain'ny Portland Justlanded.com dia mamela ny hamaha ny olana maro mifandraika amin'ny serivisy, dia miezaka ny manamboatra na mampianatra azy any OEO. Ny fampidiran-dresaka azo ampiasaina amin'ny tranonkala dia ahafahanao mamela anao hiaina amin'ny vaovao vaovao, ary koa manome anao ny valiny azo antoka.
Ny nomeraon'ny 25 - ny Hozpitality.com ho an'ny tranonkala fifanarahana
Manana andraikitra lehibe isika hanangana tranombarotra amin'ny fandraisam-pitenenana. Hozpitality.com dia manolotra ny tranokala Hozpitality.com, izay nametraka ny safidy malalaka rehetra avy amin'ny hustle indostrialy sy ny orinasa. Ny Hozpitality.com an-tserasera dia voarakitra ao Dubai, ary efa maro ireo taona no afaka manampy ny asa izay te-hanorina any amin'ny hotely fandraisam-bahiny.
Amin'ny ankapobeny, ny fandraisana ny fandraisam-pitenenana ara-barotra dia miteraka any amin'ny faritra atsinanan'ny Tendrontany Avaratra, fa tsy milaza ny tsy fitovian-toeran'ny asa any amin'ny faritra afovoan-tany. Raha hizara Hozpitality.com ianao dia ahafahanao mahazo ny tena endriny vaovao ao OAU. Raha fantatrao ny etimôlôjian 'ity teny ity mba ampio ilay izy azafady araka ny toromarika misy eto.
Azonao atao ny manamarina fa ny asa atao any amin'ny hôpitaly dia mamaritra ny tombotsoan'ny besinimaro sy ny intervention. Ny fanamafisana ny tsy fahafaha-manao ny asa atao amin'ny analogy na ny sehatra indostrialy, tsy misy na inona na inona tsy azonao atao amin'ny asa.
Номер 26 - портал Olive.com ho an'ny выпускников
Портал Olive dia voatokana ho an'ireo izay tsy nahavita ny fianarana ny fianarana. Tamin'ny taona 4 taona dia niverina ny orinasa Olive dia nanamafy ny fisorohana ny fisian'ny olana lehibe indrindra any amin'ny faritra avaratr'i Belzika - teo amin'ny 30% ny mpampianatra no tsy nisy nanao asa tany ambanivohitr'i Persa, tsy nahazo ny fepetra fampiasam-bola. Ny oliva Olive dia namorona ny votoatin'ny rindrambaiko, izay nanome alalana ny hanova ny toe-javatra.
Raha ny marina dia ny lohahevitra dia mamaritra ny lanjan'ny Olive. Global Voices - GlobalVoices translated into English Global Voices teny Malagasy - Henonao va ny tafatafan izao tontolo izao? Raiso amin ny RSS ity Ndao ho mpakafy anay ao amin ny Facebook Araho amin ny twitter izahay
Raha mampiasa ny Olive ianao dia afaka misafidy ny iray amin'ireo mpandika teny ao Dubava. Ao amin'ny tranonkala dia misy ny lisansa ho an'ireo mpitsabo, mpiambina sy mpianatra. Ny valiny any amin'ny faritra atsinanan'ny Ranomasimbe Indianina, ny seranan-tsambo Olive dia manome fahafahana ho an'ny lehibe indrindra ho an'ny fikambanana iraisam-pirenena ho an'ny Firenena Mikambana sy ny Firenena Mikambana.
Ireo orinasa manokana momba ny asa any Dubai
Anisan'ireo orinasa vahiny miasa hahazo fanampiana ara-bola. Eto amin'ity làlana ity, dia manomboka miasa amin'ny orinasa avy any Qatar, Arabia Saodita sy Kuwait. Tsy azo atao ny manadino sy misimisy ireo orinasa, voarakitra ao Dubai sy ireo orinasa hafa izay manolotra ny vacancies amin'ny totaljobs.com. Ny fandaharam-potoana isan-taona ho an'ny mpitsidika dia mahita ireo tranonkala mifandraika amin'ny tranokalam-pifandraisana. Raha fantatrao ny etimôlôjian 'ity teny ity mba ampio ilay izy azafady araka ny toromarika misy eto.
Raha ny hevitr'izany, ny lehibe indrindra amin'ireo mpampiely fampiharana dia mampiasa totaljobs.com ho an'ny mpiara-miasa, tsy misy mpanindrahindra ao amin'ny tranonkala izay ampiasain'ny olona ho toy ny populist. Ny fiteny rehetra iantsoana, totaljobs.com - lehibe indrindra ao amin'ny seranan-tsambo ho an'ny asa an-trano amin'ny fiteny Persianina.
Izahay dia manampy ny fanatontosana!
Eritrereto hoe amin'izao fotoana izao dia misy fiantraikany bebe kokoa amin'ny vahaolana amin'ny asa ataonao. Azonao atao ihany ny mampiasa ny tranokalam-pandaharana rehetra, ary miditra ao amin'ny WhatsApp rehetra mba hahitanao ny valinteny farany indrindra. Aza adino ny manohy ny fitomboan'ny toerana misy anao miaraka amin'ireo olona voakasik'izany.
Azonao atao ny mampiasa ny rafitra an-tariby mba handraisana ireo karazana fonosana. Ny orinasa dia manome fahafahana ny hametraka ny paikady fampiharana maimaim-poana tsotra sy tsara indrindra, ary koa mamela anao amin'ny olana rehetra, izay azonao atao ny mitsahatra amin'ny asa an-tselika.
Mifandraisa aminay amin'ny bilaogy, mba hahitanao ny asanao. Ho hitanao bebe kokoa, ny zava-tsarobidy indrindra ho an'ny fampandrosoana maharitra. Miezaha miasa amin'ny orinasa an-trano, tsy hahavita na inona na inona ho an'ny orinasam-pambolena.
Miantehitra amin'ny fisainana izay handehanana any Dubai - izany hoe ny tsy misy ny tetik'asa, ka ny fanapahan-kevitra horaisinao no tokony hohadinoina. Tsy ampiasaina amin'ny fampiasana ny informatika i Nikologa, ary tadiavinao izay zavatra manan-danja indrindra. Manantena isika fa ny 2020 amin'ny Expo no manakaiky an'i Dubai, ny orinasa dia mikendry ny hamoaka ny vaovao farany amin'ny vaovao farany. Miantehitra izahay mba hahafahanao manampy ny hafa manokana amin'ny sehatra fitantanana.
Mianara midinika amin'ny rehetra, aza adino ny mampiasa LinkedIn mba hahafantarana ireo mpifanila trano, ary hahomby amin'ny asa ataonao!
We приглашаем экспатов в Дубай!
Tianao ve ny hanana asa any Dubai?
Загружайте резюме Ho an'ny fiaraha-monim-pirenena amin'izao fotoana izao!
Izahay mivady dia mamaly ny fanontaniana rehetra ary mihevitra ny hisian'ny adiresy mailaka.